Olee otú Record PC ihuenyo na PC ihuenyo teepu
> Resource> Windows> Olee otú iji Record PC ihuenyo na PC ihuenyo teepu
PC ihuenyo edekọ bụ a screencasting software maka Windows 7, XP na Vista nke dere gị PC ihuenyo ọrụ, n'ịwa ngosipụta video na-ebipụta online. Ọtụtụ n'ime ndị a Windows ihuenyo ndekọ nwekwara ike idekọ audio site na kọmputa ọkà okwu ma ọ bụ a Maị, na ụfọdụ ọbụna na-agụnye edezi atụmatụ maka ime gị screencast.
Gịnị nwere ike a PC ihuenyo edekọ ime?
Isi bara uru ojiji nke ihuenyo edekọ bụ idekọ PC ihuenyo omume na ezigbo oge na-azọpụta dum usoro dị ka video. Ụfọdụ ndekọ ike idekọ webcam mgbe ị na-eme na-a show n'ihu kọmputa gị.
PC ihuenyo edekọ nwere ike igbanye ọtụtụ video formats sitere na site AVI, MPEG ka MP4 na FLV nke ọtụtụ ndị na-eji maka YouTube nkekọrịta na iPhone playbacks. I nwekwara ike ịzọpụta gị screencasting video dị ka obere-sized Flash faịlụ maka egwu na web.
Gịnị mere i kwesịrị PC ihuenyo edekọ?
A ga-enwe ọtụtụ puku ihe mere ị ka nwere a-agbalị dee gị PC ihuenyo.
N'ihi na software mmepe na nkà na-emepụta, ị nwere ike dee ngosi videos na-egosi na atụmatụ nke gị ma ọ bụ software artwork. Maka ndị nkuzi na ndị nkụzi, ị nwere ike dee gị okwu ihu ọha ma nkuzi maka online mmụta na anya mmụta. N'ihi obere ego na ụlọ ọrụ, ọ bụ a oké oke nke na-eme ngwaahịa ngosi na-azụ video dịkwuo gị azụmahịa ohere na-ewu oru oma otu iche iche. N'ihi na ezinụlọ na ntụrụndụ, PC ihuenyo edekọ software enye pụtara video n'ihi na ị na-eme ka na-akpa ọchị video na ndekọ gameplay maka YouTube na na.
Olee otú ị na-ahọrọ ndị kasị mma PC ihuenyo edekọ?
Banyere dị iche iche ọrụ 'nzube, ọgwụgwụ ọrụ nke Windows ihuenyo ndekọ nwere ike ekewa n'ime ọtụtụ iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike video na ọdịyo ma na-eme ụfọdụ ihe ndị ọzọ edezi. Gbalịa DemoCreator. Maka naanị ụfọdụ mfe ndekọ, a free ihuenyo edekọ dị ka Camstudio bụ ezughị. Na e nwekwara a ụdị screencast ngwaọrụ nke nwere ike dee gị gameplay footage dị ka Fraps. All ihuenyo ndekọ kwuru n'elu na-dakọtara na Windows 7.
PC ihuenyo edekọ bụ ọhụrụ ma nwere software na-agbasa ihe ọmụma nakwa dị ka eweta azụmahịa ohere. Ịmepụta video ngosi nnọọ ole na ole òké clicks n'ihi na obosara nkekọrịta nwere ike ịbụ na-akpali akpali na echepụtakarị. N'agbanyeghị na ị na-a na-azụ ahịa, Onye Ozizi, faili ma ọ bụ YouTube video ntinye aka, ọ bụ n'ezie ruru kwụpụ n'ime ụwa nke Ndekọ kọmputa na ihuenyo na obere mgbalị.
Weghara n'akụkụ ọ bụla nke gị na Desktọpụ ihuenyo
10 ịtụnanya demos maka Windows 10
AVI Editor maka Windows 8: Easily Dezie AVI Files na PC
Olee otú Wụnye Windows 7 na SSD
Top 5 Free Photo Editor maka Windows - Best Free Photo Editors
Abụba Iweghachite Software Ịlụ Data Back maka abụba